Kitra – «THB champion’s league 2018»: nihintsana avokoa ny Jet Mada sy ny Ajesaia | NewsMada
Kitra – «THB champion’s league 2018»: nihintsana avokoa ny Jet Mada sy ny Ajesaia
Tapitra, omaly alahady, ny dingana fifanintsanana eo amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara, taranja baolina kitra “THB champion’s league”. Tafita tampoka ny FC Vakinankaratra. Tavela kosa ny Jet Mada sy ny Ajesaia.
Tafavoaka teny Vontovorona ny Fosa Jr Boeny sy ny Elgeco Plus Analamanga ary ny FC Vakinankaratra sy ny Cnaps Sport Itasy kosa ny tany Matsiatra Ambony. Ireo ny ekipa efatra, hiatrika ny dingana farany “poule des As”, eo amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara, taranja baolina kitra “THB champion’s league”.
Nifarana, omaly, ny fifanintsanana isam-bondrona farany, nahalalana izay ho tafavoaka. Anisan’ny lalao nandrasan’ny rehetra ny fihaonana teo amin’ny Elgeco Plus sy ny Fosa Jr. Niankina tamin’io mantsy ny hahafantarana izay ho tafavoaka. Tafita tamin’ny minitra farany ny Elgeco Plus, rehefa nandresy ny Fosa Jr, tamin’ny isa tery 2 no ho 1. Nampiditra ny baolina voalohany ny Fosa, tamin’ny alalan’i Sambatra, saingy nosahalain’i Bila, tamin’ny alalan’ny “coup franc” izany. Nentin’ny roa tonta niala sasatra io isa mitovy 1 sy 1 io.
Fidirana faharoa, samy niezaka naneho ny fahaizany ny roa tonta, saingy tsy nisy intsony ny baolina tafiditra.
Nahazo “pénalty” roa
Nanao fahadisoana, tamin’ny lohalaharan’ny Elgeco, ny mpiandry tsatobin’ny Fosa Jr ka nahazo “penalty” izy ireo, tany amin’ny minitra faha-65, saingy tsy matin’i Bela izany. Nitohy hatrany ny fihaonana, mbola nahazo “penalty” fanindroany indray ny Elgeco Plus, 1 mn tsy hiravana, ary tafiditr’i Bila soa aman-tsara izany. Baolina faharoa izay nahazoan’izy ireo ny tapakila hiakarany amin’ny dingana manaraka. Mitovy ny isa teo amin’ny Elgeco Plus sy ny Jet Mada Itasy, saingy nanantombo teo amin’ny “goal average” ny ekipan’Analamanga ka tafakatra. Ny Fosa Jr indray, efa tafita satria efa manana isa 9.
Tany amin’ny kianja Ampasambazaha indray, nitranga ny tsy nampoizina satria resin’ny FC Vakinankaratra, tamin’ny isa tery 2 no ho 1, ihany koa ny Ajesaia. Ny Cnaps Sport indray, nanilika ny Akon’Ambatomena, tamin’ny isa 1 no ho 0.
Hotanterahina ny 5 sy ny 12 ary ny 19 aogositra ny lalao mandroso ary ny 2 sy 16 ary 23 septambra, kosa ny lalao miverina, amin’ny “poule des As”.